Tag: social media zano | Martech Zone
Tag: social media zano
Yemagariro Media Kushambadzira Kukura uye Kwayo Kukanganisa pane Dhijitari Kushambadzira
Svondo, July 15, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Vashambadziri vaifanirwa kuchinja chinenge chikamu chese chavo nzira dzeshambadziro kuti vafambirane nehunhu hwevatengi uye maitiro eetekinoroji. Iyi infographic, MaSocial Media Akachinja Sei Ad Ad Game kubva kuMDG Kushambadzira, inopa zvimwe zvezvinhu zvakakosha kutyaira uye kukanganisa shanduko kune yekushambadzira midhiya yenhau. Apo kushambadzira kwemagariro enhau kwakatanga kusvika pachiitiko ichi, vatengesi vaishandisa kuti vangobatana nevateereri vavo. Zvisinei, vatengesi vemazuva ano vaifanira kuchinja vazhinji
Chipiri, May 2, 2017 Monday, May 1, 2017 Douglas Karr
Mazhinji emakambani anouya kwatiri kuzobatsirwa nemagariro enhau anotarisa pasocial media seyekuburitsa uye yekuwana chiteshi, zvichidzikisira zvakanyanya kugona kwavo kukura kwekuziva kwavo, masimba, uye shanduko pamhepo. Kune zvakawanda zvakawanda kune vezvenhau, kusanganisira kuteerera kune ako vatengi uye vakwikwidzi, kuwedzera yako network, uye kukura chiremera vanhu vako uye brand vane online. Kana iwe uchingozvikwanisa iwe kungo kutsikisa uye kutarisira kutengesa pano uye
Mabasa gumi nemaviri muVhiki dzese dzeMagariro eVashandisi
Svondo, Zvita 6, 2015 Svondo, Zvita 6, 2015 Douglas Karr
Maminetsi mashoma pazuva? Maawa mashoma pavhiki? Hazvina maturo. Zvemagariro midhiya zvinoda kuenderera, kuenderera mberi kwekuedza kwemakambani kuti azive zvizere kugona kwesvikiro kukura vateereri uye kuvaka nharaunda. Tarisa uone Social Media Checklist yatakamboburitsa uye uchaiwana ichitoda kuyedza, kusarudzwa kwematurusi, uye kudyara kwenguva. Iyi infographic ndiyo yangu yekutora pane nguva yekudyara inodiwa kuti ikure
Matt Cutts akagovana vhidhiyo kwaakakurukura dambudziko iro mainjiniya vangave naro kana vakagadzira kutsamira pakati peiyo Google chinhanho algorithms nemasaini masocial. Muchidimbu, zvingave zvine njodzi huru kuvaka uku kutsamira muchiitiko icho icho pasocial media chikuva chingavharira kutsvaga kana kuwira mukuzivikanwa. Ini handina mubvunzo kuti izvi ndizvo zvazviri, asi runyerekupe rwunoramba ruripo sevashandi vekutsvaga injini vanowanzoona kuwirirana pakati